Indawo yeeNdwendwe eWrights Beach (Jervis Bay) - I-Airbnb
Indawo yeeNdwendwe eWrights Beach (Jervis Bay)
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguLucas
Indawo yeendwendwe yabucala enokufikelela ngasese kwindlu yanamhlanje elunxwemeni kwiBasin yaseSt George's emangalisayo. Indawo yokuhlala engaphandle kwamanzi kunye nokufikelela ngasese kwindlu yesikhephe kunye ne-jetty. Kufuphi neHyams Beach, iBooderee National Park, Vincentia kunye neHuskisson.
Ngenxa ye-coronavirus, sithatha amanyathelo awongezelelekileyo okucoca kunye nokucoca iindawo ezihlala zichukunyiswa phakathi kogcino.
Unokufikelela kwi-suite yeendwendwe yabucala ebandakanya igumbi lokulala elibanzi elinengeniso yabucala kunye negumbi lokuhlambela labucala elinebhafu enkulu kunye neshawari. Izihlalo zangaphandle kunye nokufikelela kwindawo yabucala eguqulelwe kwisikhephe kunye nejethi. Impahla yokuhlamba enekhitshi esisiseko (iti/ikofu, ifriji kunye nemicrowave).
I-Wifi – i-24 Mbps
I-Wrights Beach yilali encinci ejikelezwe yipaki yesizwe kwi-St George's Basin emangalisayo, ekufuphi neJervis Bay. Iimbono ezichukumisayo kunye nentabalala yezilwanyana zasendle ezibandakanya iiKangaroos ezinobuhlobo.
Sihamba ngemizuzu emi-5 ukusuka eHyams Beach entle kunye nokungena kwiBooderee National Park. Kwakhona yimizuzu eli-10 kuphela yokuqhuba ukuya ezivenkileni nakwiindawo zokutyela eVincentia naseHuskisson.
Siyafumaneka ukuze sinxibelelane neendwendwe nangona kunjalo siyayihlonipha imfihlo yakho ukuba unqwenela ukuzigcinela.
Iikhamera zokubeka iliso zikhona kwiindonga zangaphandle zendlu ukugcina ukhuseleko lwepropati.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-4608
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wrights Beach